DHAGEYSO: Amaanka gobolka Bari oo la adkeeyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home XULKA WARARKA DHAGEYSO: Amaanka gobolka Bari oo la adkeeyay
DHAGEYSO: Amaanka gobolka Bari oo la adkeeyay
Muqdisho-RisaalaFM- Gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland Yuusuf Maxamed Caweys oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay si weyn u adkeynayaan amaanka deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Bari inta lagu guda jiro Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada amaanka ay aad u adkeynayaan amaanka guud ee deegaanada Puntland, isagoo tilmaamay in ay suuragal tahay in ururka Al-shabaab ay weeraro ka geystaan deegaanada Puntland.
Waxa uu sheegay in ciidamada amaanka ay wadaan howlgallo Al-shabaab looga hortagayo si aysan weeraro ugeysan Bisha Ramadaan.
Maamulka Puntland ayaa horey waxa ay usheegeen in ay adkeynayaan amaanka deegaanada Puntland, waxaana laga cabsi qabaa in Al-shabaab ay weeraro ka geystaan deegaanada Puntland.
Previous articleQarax 11 Qof ku dilay magaalada Istanbul
Next articleDaawo kulanka dhexmaray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya